Cristiano Ronaldo oo ka warbixiyay arin muhiim ah uu ka bartay macalinkiisii hore Sir Alex Ferguson – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo ka warbixiyay arin muhiim ah uu ka bartay macalinkiisii hore Sir Alex Ferguson
Dajiye August 23, 2018
(Juventus) 23 Agoosto 2018. Laacibka reer Portugal iyo kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu shaaca ka qaaday waxyaabaha uu ka bartay macalinkiisii hore kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson.
Cristiano Ronaldo ayaa hormar weyn ka sameeyay mudada uu ka hoos shaqeenayay Alex Ferguson, kahor inta uusan u dhaqaaqin kooxda Real Madrid sanadii 2009.
“Dabcan waxaan ahaa bilawga xirfadeyda kubada cagta, kadib markii aan kaga soo dhaqaaqay Sporting Lisbon kooxda Manchester United, Portugal dhicitaanka waa mid joogta ah, laakiin England ma ahan go’aanka ugu fiican”.
“Sidaas darteed, wuxuu I baray Alex Ferguson, waxa aan sameyn karo, wuxuu ii sheegay in horyaalka Premier League aanan si fudud loo dhicin, isla markaana ay yihiin kuwo aad u adag”.
“Sidii aan horey u sheegay dhowr jeer, wuxuu i baray wax walba, anigana wuxuu ahaa sida aabahay oo kale, sababtoo ah wuxuu iga caawiyay waxyaabo badan ee kooxda Manchester United”.
Sergio Busquets oo dabka ku shiday maamulka La Liga ee dalka Spain, kadib go’aankii ay qaateen
Tartanka Degmooyinka Gobalka Benaadir oo Galabta furmaya...(Yaa lagu daah furayaa??)